कांग्रेस अग्रपंक्तिका नेता को प्रत्यक्षमा, को समानुपातिकमा?
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न चाहने कांग्रेसका शीर्ष र केन्द्रीय नेताको सिट सुरक्षित भएको छ। कांग्रेसको संसदीय समितिले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनौटको काम गरिरहेको छ। समितिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्न चाहने केन्द्रीय नेताहरुका लागि सिट सुरक्षित गरिदिएको हो।
संसदीय समितिले शीर्षसहित चुनाव लड्ने इच्छा गरेका सबै केन्द्रीय केन्द्रीय नेताहरुलाई उठाउने चुनावी क्षेत्र पनि निर्विवाद रुपमा छनौट गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा डडेल्धुराबाटै चुनाव लड्ने पक्का भएको छ। देउवा प्रतिनिधि सभाका लागि डडेल्धुराबाट एक मात्र उम्मेदवारका रुपमा सिफारिसमा परेका थिए। कैलाली–५ नम्बर क्षेत्रबाट पनि देउवाको सिफारिस आएको थियो। तर, देउवा लड्दै आएको क्षेत्रमा उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा चुनाव लड्ने कुरा लगभग टुंगिएको छ।
बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनाव लड्ने भएका छन्। पौडेलसँगै २ नम्बर क्षेत्रबाट पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी र केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको नाम पनि सिफारिस केन्द्रमा आएको थियो। संसदीय समितिमा भने पौडेललाई नै २ नम्बर क्षेत्रबाट चुनाव लडाउनु पर्नेमा कुनै विवाद छैन। तर, सोही क्षेत्रबाट सिफारिसमा परेका शंकर भण्डारीले पौडेललाई छोडेपनि जोशीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागिसकेको छैन। जोशीलाई क्षेत्र नम्बर २ को उम्मेदवार बनाउने भन्नेमा समितिमा कुरा भइरहेको छ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ बाट युवा नेता प्रदिप पौडेल, शंकर भण्डारी, गोविन्द भट्टराई र ध्रुव वाग्लेको नाम सिफारिसमा परेको छ। तर, १ नम्बर क्षेत्रमा रामचन्द्र उठ्ने भएपछि जोशीलाई २ नम्बर क्षेत्र दिने गृहकार्य कांग्रेसभित्र भइरहेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
जोशीलाई टिकट नदिँदा त्यसको असर पौडेल उठ्ने क्षेत्रमा पर्ने भएकाले उनलाई मिलाउन २ नम्बर क्षेत्र दिन लागिएको ती नेताले बताए। औपचारिकरुपमा निर्णय सार्वजनिक गर्न भने बाँकी रहेको उनले बताए। २ नम्बर क्षेत्रमा जोशीले टिकट पाए शंकर भण्डारीलाई समानुपातिक सूचीमा राखिने छ। २ नम्बर क्षेत्रकै प्रदिप, धु्रब र गोविन्द भट्टराईलाई प्रदेशमा उठाउने विषयमा संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेको छ।
महामन्त्री डा. शशांक कोइराला नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बाट उम्मेदवार बन्ने छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि कोइराला सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मै निर्वाचन लड्ने छन् भने गोपालमान श्रेष्ठ स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदबार बन्ने पक्का भएको छ।
नेता विमलेन्द्र निधि धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवार बन्ने टुंगो लागेको छ। प्रभावशाली नेताहरु डा. रामशरण महत नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ र अर्जुननरसिंह केसीलाई क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार बनाउने संसदीय समितिमा सहमति जुटिसकेको छ। नुवाकोटबाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेका बहादुरसिंह लामा तामाङलाई समानुपातिकको सूचीमा राखिएको छ। अर्जुननरसिंह केसीका भाइ जगदिशनरसिंह केसीलाई भने प्रदेशतर्फको उम्मेदवार बनाइनेछ।
सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ मा नेता पूर्णबहादुर खड्का र क्षेत्र नम्बर २ मा हृदयराम थानी चुनाव लड्ने छन् भने कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट नेता रमेश लेखक चुनावी मैदानमा उत्रिने पक्का छ।
यस्तै, आनन्दप्रसाद ढुंगाना धनुषा क्षेत्र नम्बर १, रामकृष्ण यादव धनुषा २ र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रीसमेत रहेका महेन्द्र यादव धनुषाकै क्षेत्र नम्बर ४ बाट उम्मेदवार बन्ने लगभग पक्का छ। यसैगरी केन्द्रीय सदस्य दिपक गिरी दाङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचन लड्ने पक्का भएको छ भने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सुनसरी ४, डा. मिनेन्द्र रिजाल मोरङ २, महेश आचार्य मोरङ ४, मोरङ ५ बाट अमृत अर्याल र मोरङ ६ बाट डा. शेखर कोइराला चुनाव लड्ने भएका छन्।
यसैगरी, झापा १ बाट केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्मा बन्ने टुंगो लागेको छ भने झापा क्षेत्र नम्बर ३ राप्रपालाई छोड्ने लगभग सहमति भइसकेको छ। राप्रपालाई छोड्ने भएकाले सिटौला समानुपातिक उम्मेदवार बन्ने भएका हुन्।
यसैगरी एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका ओखलढुंगामा रामहरि खतिवडा, संखुवासभामा दिपक खड्का, डोटीमा वीरबहादुर बलायर, मुगुमा हस्तबहादुर मल्ल र पर्वतमा अर्जुनप्रसाद जोशीले आफ्नो सिट सुरक्षित लगभग गरिसकेका छन्।
गच्छदार पुरानै क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने १० वर्षपछि कांग्रेसमा फर्किएका नेता विजयकुमार गच्छदार आफ्नो पुरानै क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने भएका छन्। गच्छदार सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने भएका छन्। गच्छदार अघिल्लो निर्वाचनमा पनि सुनसरी ३ बाट निर्वाचित भएका थिए भने मोरङमा डा. कोइरालासँग पराजित भएका थिए।
केन्द्रीय नेता जो प्रत्यक्ष चुनाव लड्न चाहेनन् केन्द्रमा प्रभाव राख्ने र जनाधार भएका नेताहरु यो पटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवार बन्ने भएका छन्। पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौला अघिल्लो पटक झापा ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपनि यो पटक चुनाव नलड्ने भएका छन्। बामगठबन्धन भएको र राप्रपालाई नछोड्दा चुनाव हारिने डरले सिटौलाले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने इच्छा देखाएनन्। उनले आफू समानुपातिकमै बस्ने भनेपछि उक्त क्षेत्र राप्रपालाई दिने तयारी कांग्रेसको छ।
यस्तै, अघिल्लो पटक सिरहाबाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेकी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव पनि समानुपातिकमै बसेकी छिन्। बामगठबन्ध र स्थानीय तह निर्वाचनमा नराम्रोसँग आफ्नै चुनावी क्षेत्रमा कांग्रेस पराजित भएपछि उनी समानुपातिकमै आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नतर्फ लागेकी हुन्। रुपन्देही ३ बाट अघिल्लो पटक एमालेका घनश्याम भुसाललाई पराजित गरेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणले पनि प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने पक्का भएको छ। उक्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने इच्छा नदेखाएपछि खाँणलाई समानुपातिक सूचीमा राखिएको छ। खाँणले छोडेको क्षेत्र राप्रपा प्रजातान्त्रिकका दिपक बोहोरालाई छोडिने भएको छ।
अघिल्लो पटकपनि समानुपातिकको सूचीबाट सांसद बनेकी पूर्वकोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव यो पटक पनि समानुपातिकमै बसेकी छिन्। यस्तै अघिल्लो पटक दाङ क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव जितेकी पार्वता डिसी चौधरी पनि समानुपातिक उम्मेदवार बन्ने पक्का भएको छ भने दार्चुलाका दिलेन्द्र बडु पनि समानुपातिकमै बसेका छन्।
यसैगरी केन्द्रीय सदस्यहरु सुजाता कोइराला, पुष्पा भुसाल, सरिता प्रसाईँ, लक्ष्मी परियार, कमला पन्त, धनराज गुरुङ, सीता गुरुङ, सुजाता परियार, कल्याण गुरुङ लगायत केन्द्रीय सदस्य पनि समानुपातिक उम्मेदवार बनेका छन्।
काठमाडौंमा अधिकांश पुरानै अनुहार उठ्ने १० वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौंमा कांग्रेसबाट अधिकांश उम्मेदवार अघिल्लो पटककै दोहोरिने लगभग पक्का छ। पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह काठमाडौं क्षेत्र नम्बर एक बाट चुनाव लड्ने भएका छन् भने गगन थापा क्षेत्र नम्बर ४ बाट लड्ने पक्का छ।
यस्तै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन हुँदा चुनाव जितेका दिपक कुइँकेल फेरि दोहोरिने र क्षेत्र नम्बर ३ मा अम्बिका बस्नेतलाई मैदानमा उतारिने लगभग टुंगा लागेको छ। नेता नरहरि आचार्यको चुनावी क्षेत्र काठमाडौं ५ बाट यो पटक भने नेता डा. प्रकाशशरण महतले लड्ने भएका छन्। अघिल्लो पटक एमालेका इश्वर पोखरेललाई हराएका आचार्य यो पटक स्वास्थ्यका कारण चुनाव नलड्ने भएपछि काठमाडौं जिल्लाले उनको नाम सिफारिस नै गरेन।
काठमाडौं ६ मा जिल्ला सभापति सवुज बानिया र नेता भीमसेन दास प्रधानले दाबी गरिरहेका छन्। अघिल्लो पटक चुनाव जितेका भीमसेनदास नै फेरि दोहोरिने सम्भावना बढी छ। काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ का विषयमा भने टुंगो लाग्न बाँकी छ। क्षेत्र नम्बर ८ मा केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी र क्षेत्र नम्बर ९ मा ध्यानगोविन्द रञ्जित नै दोहोरिने लगभग पक्का छ।
अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चुनाव हराएर चर्चामा आएका राजेन्द्र केसीले क्षेत्र नम्बर १० मा फेरि टिकट पाउने पक्का भइसकेको छ। राप्रपालाई काठमाडौंमा एउटा क्षेत्र छोड्दा कांग्रेसले ७ नम्बर छोड्ने तयारी गरेको छ।
प्रकाशित ५ कार्त्तिक २0७४ , आइतबार | 2017-10-22 09:41:01
वर्षको उत्कृष्ट स्टोरीः डा. बाबुराम
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई नेपालको राजनीतिमा अलग धुव्रका रूपमा स्थापित छन् । उनी सत्तामा
पूर्व गृहमन्त्री र राज्यमन्त्री विरुद्ध
वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका एमाले र माओवादी केन्द्रले विद्रोही उम्मेदवारहरुको सामना गर्नु परेको छ। वाम गठबन्धनको तर्फबाट
दिल्लीबाट फर्किएका राजदूत टिकटका
भारतका लागि नेपालका राजदूतबाट राजीनामा दिएका दीपकुमार उपाध्याय नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट औपचारिकरुपमा
जो पहिले मन्त्री भए, अहिले प्रदेशतिर
मन्त्रीपरिषदमा पुगिसकेका र केन्द्रीय संसदको सदस्य भइसकेका नेताहरु मर्यादाक्रममा त्यो भन्दा तल रहने प्रदेश सभाको सदस्य समेत बन्न तम्तयार
पर्यटकले खचाखच मनास्लु पदमार्गका
मनास्लु हिमाल आरोहण गर्ने आरोही, लार्केपास गर्ने पदयात्री, चुमभ्याली र नुब्रीभ्याली अवलोकन गर्न आएका विदेशी पर्यटकले गोरखाको मनास्लु
डडेल्धुरामा देउवाले जित्लान्? यस्तो
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा डडेल्धुराबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। लामो समयदेखि